» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १६
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १६
१३ बैशाख २०७७, शनिबार १७:३७
मकवानपुर, १३ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । यस भिडियो सिरिजमा हामी नेपाल स्टारको अडिसन राउण्डबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भिडियो सिरिजको सोह्रौँ भागमा धनगढी अडिसनबाट छानिएका अन्तिम २ जना प्रतियोगीहरु सोहिल शाहु र लक्ष्मी रानाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
१०) सोहिल शाहु– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका दशौँ प्रतियोगी हुन् सोहिल शाहु । क्वेस्ट ब्याण्डमा गितारिष्टका रुपमा आवद्ध भएका उनी संगीत क्षेत्रमा संघर्षरत छन् । उनले अडिसनमा ‘हिँडाईका चालहरुमा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका थिए ।
११) लक्ष्मी राना– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएकी एघारौँ प्रतियोगी हुन् लक्ष्मी राना । धनगढीको राजपुर निवासी लक्ष्मी अहिले अध्ययन गर्दैछिन् । १७ जनाको संयुक्त परिवारमा हुर्किएकी लक्ष्मीलाई आमाले संगीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दिने गरेको उनी बताउँछिन् । १८ वर्षीया लक्ष्मीलाई अडिसनमा निर्णायकहरुले सुरुमा थारु गीत गाउन आग्रह गरेपछि उनले सुरुमा थारु गीत सुनाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएकी हुन् । उनले छनौट पश्चात पनि ‘चौबन्दीमा पटुकी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
दिभान्सी र सिद्धार्थले जिते तेस्रो अवार्ड
४ जना प्रतियोगी बाहिरिएपछि निर्णायकलाई नै चित्त बुझेन